Jessica Hawthorne-Castro Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jessica Hawthorne-Castro
Jessica Hawthorne-Castro, CEO we Hawthorne, ine hunyanzvi yakamisa iyo agency kumberi kweiyo nyowani kushambadzira shanduko yekushambadzira uko hunyanzvi hunosangana nesainzi. Kubva mukugadzira uye kugadzirwa kune vezvenhau uye analytics, Jessica anozvipira kune yemhando yepamusoro uye hunyanzvi munzvimbo dzese dzedare Basa rake rinonyanya kusanganisira kukurudzira hukama hwevatengi hwakareba kuti uvandudze misika yekushambadzira ine hungwaru, yakagadzirirwa kupindura mhinduro yevatengi nekukurumidza.
Priming iyo Omnichannel yeBlack Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro
Chipiri, Mbudzi 7, 2017 Jessica Hawthorne-Castro
Hapana mubvunzo nezvazvo, zvekutengesa zviri kuita shanduko ine simba. Iko kuyerera kunogara pakati penzira dzese kuri kumanikidza vatengesi kuti vawedzere kutengesa kwavo uye nzira dzekutengesa, kunyanya pavanosvika kuBlack Friday neCyber ​​Muvhuro. Dhijitari yekutengesa, iyo inosanganisira online uye nhare, zviri pachena nzvimbo dzakajeka mukutengesa. Cyber ​​Muvhuro 2016 yakadana zita rekuti rakakura zuva rekutengesa pamhepo muUS nhoroondo, iine $ 3.39 bhiriyoni mukutengesa kwepamhepo. Chishanu Chishanu chakauya
China, July 7, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Jessica Hawthorne-Castro
Sezvo nzira dzekushambadzira nedhijitari dziri kuwedzera uye morph, makambani anowedzera mari yakawanda kushambadziro yeterevhizheni kusvika kune vanoona vanopedza maawa makumi maviri nemaviri kusvika makumi matatu vachiona TV vhiki rega rega. Kunyangwe izvo zvinogona kutaurwa neindasitiri yekushambadza mumakore mashoma apfuura zvichidonongodza kuderera kweterevhizheni sezvatinozviziva, kushambadzira kweterevhizheni kuri mupenyu, zvakanaka, uye kuchipa mhedzisiro yakasimba. Mune ichangoburwa MarketShare kudzidza iyo yakaongorora kushambadzira kuita kune ese maindasitiri nenhepfenyuro senge